ရလဒ်များ - ၂၀၁၂ ခုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံး Linux ဖြန့်ဖြူးမှုကဘာလဲ။ | Linux မှ
ရလဒ်များ - ၂၀၁၂ ခုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံး Linux ဖြန့်ဖြူးမှုကဘာလဲ။
၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာငါတို့မှာအရသာအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ Linux ရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပုံမှန်ဖြန့်ဝေမှုများ၏မူကွဲအသစ်များရှိသည်။ ဖြန့်ချိမှုအသစ်အချို့သည်တစ်ခုထက်ပိုပြီးပျော်ရွှင်စေခဲ့သည်။
ဤဆောင်းပါးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရလဒ်များ၏အသေးစိတ်ကိုဆန်းစစ်လေ့လာထားသည် မဲပေး ငါတို့တစ်ပါတ်အကြာကစတင်ခဲ့သည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 2115 ကလူ သူတို့ထားခဲ့တယ် မဲပေး!
4 အကောင်းဆုံးလူသစ် distro နှင့်အကောင်းဆုံး desktop distro: Linux Mint 13
5 Arch သုံးစွဲသူများအတွက်အကောင်းဆုံး distro: Arch Linux
6 ဗျာဒိတ်ဆု - Manjaro Linux
7 Laptop များအတွက်အကောင်းဆုံး distro: Ubuntu 12.04 LTS
8 စီးပွားရေးအတွက်အကောင်းဆုံး desktop layout: RHELD 6
9 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆာဗာများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြန့်ဖြူး: RHEL & SLES
10 အကောင်းဆုံး LiveCD: KNOPPIX & Puppy Linux
11 လုံခြုံရေးသုံးသပ်ချက်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြန့်ဝေခြင်း - BackTrack Linux 5
12 Multimedia editing အတွက်အကောင်းဆုံးဖြန့်ဖြူးခြင်း: Ubuntu Studio 12.04
13 အကောင်းဆုံးပညာရေးဖြန့်ဖြူးမှု - Edubuntu ၁၂.၀၄
14 အကောင်းဆုံးအသေးစားဖြန့်ဖြူးမှု - DSL 4.4.10 & Slitaz 4
Ubuntu ၂၈.၉၈% (၆၁၃ မဲ)
Linux Mint ၂၇.၇၅% (၅၈၇ မဲ)
Debian ၁၁.၁၆% (၂၃၆ မဲ)
Arch Linux ၁၀.၄၅% (၂၂၁ မဲ)
အခြား - ၉.၁၇% (၁၉၄ မဲ)
Fedora ၇.၉၄% (၁၆၈ မဲ)
OpenSUSE ၃.၄၅% (၇၃ မဲ)
မာဂျီးယား ၁.၀၉% (၂၃ မဲ)
Ubuntu နှင့် Linux Mint တို့သည်ပထမနှင့်ဒုတိယနေရာတွင်တိတ်ဆိတ်စွာတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ နှစ်ခုအကြားသူတို့ 50% ကျော်မဲကိုယူ။ တတိယနေရာတွင် Debian ဖြစ်ပြီး Arch Linux ကအနီးကပ်လိုက်သည်။
စိတ်ဝင်စားစရာမှာ Debian အခြေပြုဖြန့်ဝေမှုများသည် ၆၈% ခန့်ရှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာ Fedora သို့မဟုတ် OpenSUSE ကဲ့သို့သောလူကြိုက်များသောဖြန့်ချိမှုများသည်ရှင်းလင်းစွာကျဆင်းနေဆဲဖြစ်သည်။
အများပြည်သူ၏တောင်းဆိုမှုအရအခြားအမျိုးအစားအတွင်းမှအများဆုံးဖော်ပြခဲ့သောအငြင်းပွားမှုများမှာမဲအရေအတွက် ၁၉၄ ထက်မနည်းသောမဲများဖြစ်ပြီး Ubuntu မျိုးကွဲ (Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu), Manjaro, Crunchbang, Trisquel, SolusOS, အခြားသူများအကြား Chakra Linux, Bodhi Linux, Gentoo, Sabayon, Elementary OS ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Mageia ကိုကျွန်တော်အံ့အားသင့်မိသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ပြည့်စုံပြီးအရည်အသွေးကောင်း "beginner" distro ဖြစ်သည်။ သူမနှင့် Mandriva နှင့်၎င်း၏ဘဏ္problemsာရေးပြproblemsနာများနှင့်ဆက်နွယ်နေသူများစွာရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါမသိရပါဘူး, ဒါပေမယ့်ရယ်စရာပါပဲ။
အမှန်တရားကတော့စစ်တမ်းမေးခွန်းကနည်းနည်းလေးလှပါတယ်။ ငါ "အကောင်းဆုံး" Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်းမရှိကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။ အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲ၏လွတ်လပ်မှုကြောင့်တစ်ခုချင်းစီ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်ပိုမိုကိုက်ညီသောလိုက်လျောညီထွေရှိမှုများကိုဖန်တီးနိုင်သည်။
ဒီသဘောနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အကောင်းဆုံး distros တွေရှိတယ်။
သတ်သတ်မှတ်မှတ်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခု (Desktop၊ ဆာဗာများ၊ ပညာရေး၊ မာလ်တီမီဒီယာ၊ လုံခြုံရေးစသည်)
အကောင်းဆုံးလူသစ် distro နှင့်အကောင်းဆုံး desktop distro: Linux Mint 13
Ubuntu 12.04 LTS (၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်အတည်ငြိမ်ဆုံး Ubuntu ဗားရှင်း) ကို အခြေခံ၍ Linux Mint 2012 သည်အသုံးပြုသူအသစ်လိုချင်သမျှကိုပေးသည်။
ကောင်းမွန်တဲ့ hardware support၊
Windows ကဲ့သို့သော user interface (Unity သို့မဟုတ် Gnome Shell အခြေပြု distros များနှင့်မတူပဲ) စသည်တို့ဖြစ်သည်။
(Ubuntu နဲ့ Debian ကိုအခြေခံထားလို့ပါ)
Arch သုံးစွဲသူများအတွက်အကောင်းဆုံး distro: Arch Linux
၏သင်တန်း Gentoo ကဲ့သို့အလွန်ကောင်းသောအခြားသူများလည်းရှိပါတယ်။ သို့သော် Arch Linux သည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်ပုံမှန်တိုးတက်နေသည်။ ၎င်းတွင်အမှန်တကယ်ရှူရှိုက်မြင်နိုင်သောအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုရှိပြီး Aleph နှင့်တူသောဝီကီတစ်ခုရှိသည်။ အရာအားလုံးသည်ရှိ၏။
Pacman ထက်ပိုပြီးမသေးငယ်တဲ့အရာတွေ Arch ကကျွန်တော့်အတွက်အကောင်းဆုံး package package ကိုရှိပါတယ်။ အလွန်ကျယ်ပြန့်သောတရားဝင် repositories ရှိခြင်းအပြင် AUR (Ubuntu's PPA repositories ကဲ့သို့သောအရာ၊ သို့သော် MUCH ပိုကောင်းသည့်) မှတဆင့်အပိုပရိုဂရမ်များတပ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဝိရောဓိအနေဖြင့် Arch အတွက်အထုပ်တစ်ခုဖန်တီးခြင်း Debian သို့မဟုတ် Ubuntu အတွက်ဖန်တီးရန်ထက်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် APA တွင် PPAs ထက် packets များစွာရှိသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် AUR ကိုထည့်သွင်းပြီးလျှင်ပရိုဂရမ်များရှာဖွေခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းသည်ချိုသာသည် (Ubuntu နှင့်မတူသည်မှာရရှိနိုင်သည့် PPAs ၏အခြေခံကိုရှာ။ မရပါ။ ၎င်းသည် PPA တပ်ဆင်ရန်အတွက် command များစွာလိုအပ်သည်။ ) ။
ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို Arch တစ်လေပြေစေသည်။ ၎င်း၏အတွေးအခေါ်သည် Keep it Simple, Stupid (KISS) အယူအဆအပေါ်အခြေခံသည်။ အမှန်တရားမှာအချို့သောအခြေခံသဘောတရားများကိုသင်ကိုင်တွယ်သည်နှင့်တပြိုင်နက် Arch သည် Ubuntu နှင့်အခြားအရာများထက်ပိုမိုရိုးရှင်းပြီး ပို၍ အဆင်ပြေလွယ်ကူပြီးလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဗျာဒိတ်ဆု - Manjaro Linux
Arch Linux ကိုအခြေခံပြီး Arch ကို GREAT distro ဖြစ်စေတဲ့အရာအားလုံးပါ ၀ င်ပါတယ်။ သို့သော်၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့အများစုကအလွန်တန်ဖိုးထားသည့်ဖြည့်စွက်ချက်ရှိသည် - ပုံမှန်အရသာ GNOME, KDE, LXDE စသည်တို့ကဲ့သို့အခြား distros များကဲ့သို့၎င်း၏တပ်ဆင်ခြင်းသည်အလွန်မြန်သည်။ Arch ၌မူ, သင်သည်အရာအားလုံးကိုလက်ဖြင့်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်၊ ၎င်းသည်ကန ဦး တပ်ဆင်မှုကိုအတော်အတန်ဖြစ်စေသည် engo… နှေးနှေး။
တစ်နည်းပြောရရင် Manjaro ဟာကမ္ဘာနှစ်ခုလုံးရဲ့အကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်မှုပဲ။
Laptop များအတွက်အကောင်းဆုံး distro: Ubuntu 12.04 LTS
Ubuntu 12.04 သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်စီမံခန့်ခွဲမှုရှိပြီးအလွန်တည်ငြိမ်ပြီး၎င်းအမျိုးအစားများနှင့်ပိုမိုသင့်တော်သော graphical interface ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်။
ဒီရိယာထဲမှာ Lubuntu နဲ့တခြား LXDE အခြေပြုဖြန့်ဖြူးမှုအားလုံးနီးပါးကိုထည့်နိုင်တယ်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်ဟောင်းနွမ်းနေပြီသို့မဟုတ်ပြန်လည်ရှင်သန်ရန်လိုအပ်သည့်“ အားကောင်းသော” ကိရိယာများမဟုတ်ပါကအထူးသဖြင့်မှန်ကန်သည်။
စီးပွားရေးအတွက်အကောင်းဆုံး desktop layout: RHELD 6
မကြာသေးမီနှစ်များက SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED) သို့သွားခဲ့သည်။ သို့သော်ယခုနှစ် Red Hat Enterprise Linux Desktop6(RHELD) သည်၎င်း၏အိမ်စာကိုမှန်ကန်စွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အဘယ်ကြောင့်ပြောင်းလဲမှု? Red Hat သည်“ cloud” နှင့်ဆက်စပ်သောနည်းပညာအသစ်များနှင့်နည်းပညာအသစ်များတွင်ကြီးမားသောအပြောင်းအလဲများပြုလုပ်နေသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆာဗာများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြန့်ဖြူး: RHEL & SLES
SUSE Linux Enterprise Server6နှင့် Red Hat Enterprise Linux6တို့သည်အောင်မြင်သူများဖြစ်ကြသည်။ နှစ် ဦး စလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိပြီးသားဖြစ်သောမယုံနိုင်လောက်သောဟာ့ဒ်ဝဲအထောက်အပံ့ရှိသည်၊ ၎င်းမှာစနစ်တည်ငြိမ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့အပြင်နှစ် ဦး စလုံးကိစ္စများတွင်ရေနံအကူအညီပေးရေးသည်သူ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။
Red Hat အမှုအရာသည်အလင်းရောင်ရနေသည်။ ယခုနှစ်တွင်ကုမ္ပဏီသည်စတော့ဈေးကွက်တွင်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံကျော်လွန်သွားသည်။ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်နိုင်သည်။
အကောင်းဆုံး LiveCD: KNOPPIX & Puppy Linux
ဒီကနေ့ဖြန့်ဝေသူအားလုံးနီးပါးကို live-cd အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင်ဤအမျိုးအစားသည်တရားဝင်မှုအချို့ကိုဆုံးရှုံးသည်။ သို့သော်ဆွစ်ဇာလန်ကြည်းတပ်ဓားပုံစံတွင်အထွေထွေရည်ရွယ်ချက်ကိရိယာများပါ ၀ င်ပြီးဒေတာများပြန်လည်ရယူရန်သို့မဟုတ်အခြားတပ်ဆင်မှုများ၊ အရန်ကူးခြင်းများစသည်တို့ကိုအထူးအသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့်ဖြန့်ဝေမှုများရှိသည်။
LXDE ကိုအသုံးပြုသော Knoppix နှင့် ultra-light JWM ကိုအသုံးပြုသော Puppy Linux တွင်ဤကိရိယာအားလုံးပါဝင်သည်။ ဖြန့်ဝေမှုနှစ်ခုလုံးသည်အမျိုးသမီး cd နှင့်လူကြီးလူကောင်းတို့၏ဆွဲကြိုးများအတွက်အလွန်အမင်းအကြံပြုပါသည်။
လုံခြုံရေးသုံးသပ်ချက်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြန့်ဝေခြင်း - BackTrack Linux 5
BackTrack သည်မည်သည့် system ကိုမဆိုစစ်ဆေးရန် (သို့) network ပြproblemsနာများကိုစစ်ဆေးရန်အတွက်အကောင်းဆုံးအဖြူရောင် ဦး ထုပ်လုံခြုံရေးကိရိယာများကိုဆက်ပေးသည်။
၎င်းတွင် port နှင့်အားနည်းချက်ရှိသည့်စကင်နာများ၊ ဖိုင်များ၊ sniffers၊ မှုခင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိရိယာများနှင့်ကြိုးမဲ့စစ်ဆေးခြင်းကိရိယာများအပါအ ၀ င်လုံခြုံမှုမရှိသောလုံခြုံရေးကိရိယာများ၏ရှည်လျားသောစာရင်းပါဝင်သည်။
Multimedia editing အတွက်အကောင်းဆုံးဖြန့်ဖြူးခြင်း: Ubuntu Studio 12.04
သက်ဆိုင်ရာ Ubuntu ဗားရှင်းကိုအခြေခံထားသည့် Ubuntu Studio 12.04 သည်အသံ၊ ဗွီဒီယိုနှင့်ဂရပ်ဖစ်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အနိုင်ရသူဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်အလွန်ပြည့်စုံသောကိရိယာတန်ဆာပလာများအပြင်အမျိုးမျိုးသောပုံစံများနှင့်ပုံစံများနှင့်ကုဒ်နံပါတ်များကိုသိသိသာသာအထောက်အပံ့ပေးသည်။ မာတီမီဒီယာ။
အသံတည်းဖြတ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ Musix သည်အထူးဖော်ပြချက်ထိုက်သည်။ အာဂျင်တီးနားမူရင်းကိုဖြန့်ဝေသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအရည်အသွေးဖြင့်အံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။ အသံဖမ်းခြင်းများတွင် "ခုန်ကျော်သွားခြင်း" ကိုကာကွယ်ရန်နှင့်အဆင့်မြင့်သောအသံရေးသားခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ခြင်းကိရိယာများအားလုံးပါ ၀ င်သောသက်ဆိုင်ရာ low-latency kernel ပါဝင်သည်။ နောက်ထပ်မှတ်သားထိုက်သောအချက်မှာ၎င်းသည် FSF မှ ၁၀၀% အခမဲ့ဟုယူဆသောအပိုပစ္စည်းအနည်းငယ်ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံးပညာရေးဖြန့်ဖြူးမှု - Edubuntu ၁၂.၀၄
Edubuntu သည်နိုင်ငံများစွာမှပညာရှင်များ၊ နည်းပညာပညာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ တီထွင်ခဲ့သည်။ Edubuntu ကို Ubuntu တွင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးအသက် ၆ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်ကြားရှိလူ ဦး ရေကိုပစ်မှတ်ထားသော LTSP သုံးစွဲသူများ၏ဗိသုကာနှင့်တိကျသောပညာရေးဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုများပါဝင်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၎င်းသည်ပညာရေးဆိုင်ရာစီမံကိန်းနှင့်မသက်ဆိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်ကြိုက်သည်။ သီးခြားပညာရေးအစီအစဉ်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်ပြည်နယ်သို့မဟုတ် NGO မှတီထွင်ထားသောဖြန့်ဝေမှုများကိုအထူးရည်ညွှန်းသည် (ဥပမာ - Plan Conectar Igualdad သို့မဟုတ်ကလေးတစ် ဦး လျှင် Laptop တစ်ခု) ။
အကောင်းဆုံးအသေးစားဖြန့်ဖြူးမှု - DSL 4.4.10 & Slitaz 4
Damn Small Linux သည် Knoppix ကို အခြေခံ၍ အလုပ်လုပ်ပြီးပြည့်စုံသော Linux LiveCD ဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်သည်။ Intel 80486 ပရိုဆက်ဆာများကဲ့သို့သောအရင်းအမြစ်များနည်းပါးသောကွန်ပျူတာများတွင်အလုပ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အရွယ်အစားသေးငယ်ခြင်း (50MB) သည် Knoppix ၏အနှစ်သာရကိုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးတွင်ထိန်းသိမ်းရန်စီမံသည် စားပွဲခုံ။ အရွယ်အစားသေးငယ်မှုကြောင့်၎င်းကို USB မှတ်ဉာဏ်အတွင်းသို့ထည့်ပြီးမည်သည့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မဆို boot လုပ်နိုင်သည်။
SliTaz GNU / Linux သည်အသေးစားဖြန့်ဝေမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး LinuxGNU / Linux လည်ပတ်မှုစနစ်၏ LiveCD သည် RAM မှတ်ဥာဏ် 128 MB ရှိသည့်ဟာ့ဒ်ဝဲပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး GNU / Linux minidistribution တွင်အသေးငယ်ဆုံးဖြစ်ကာ CD 30 MB နှင့် CD Mb 80 Mb ရှိသည်။ hard drive ကိုတစ်ချိန်က installed ။ 16 Mb ရှိတဲ့ RAM က JWM window manager ရှိတယ်။
စာရင်းအပြည့်အစုံကိုကြည့်ပါ Linux အသေးစားဖြန့်ဝေမှုများ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » ရလဒ်များ - ၂၀၁၂ ခုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံး Linux ဖြန့်ဖြူးမှုကဘာလဲ။
Debian ကိုရင်းမြစ်တစ်ခုအနေဖြင့်သင်ပြောပြီးပြီ။ ဒါပေမယ့် Arch နဲ့ Mint ကြားကသူတို့အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေပါပဲ။
ubuntu နှင့် mint ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် newbies အတွက်ဖြစ်သည်ဟုပြောရန်လူသစ်များအတွက်ဖြန့်ချိသည့်အနေဖြင့် linux mint?, classic ။ သင်သေချာပေါက် linux fanboys ပါ
ဒါဝိဒ်သည် solis hernandez ဟုသူကပြောသည်
ဆောင်းပါးကောင်း၊ ငါ Mint ကို Ubuntu ထက်ပိုကြိုက်တယ်၊ ဒီနှစ်ခုကိုအများကြီးတိုင်းတာခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ငါ mint, greetings နဲ့အမြဲတမ်းကပ်ထားတယ်။
David Solis Hernandez အားပြန်ပြောပါ
အရသာ၊ အရောင်များ၊ ms-dos 3.1 မှ windows 8 အထိ၊ အရာအားလုံးကိုကြိုးစားပြီးသည်နောက်၊ kubuntu, ubuntu, fedora, စသည်ဖြင့်အရာရာတိုင်းကိုကြိုးစားပြီးသည်။ ငါ opensuse ကိုပိုနှစ်သက်သည်။
CrunchBang 11 ထည့်သွင်းရန်မှာပျောက်ဆုံးနေသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်၊ အချို့သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပြုပြင်ရန်လိုအပ်သော်လည်းသင်ခြေလှမ်းပေါ် မူတည်၍ ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။
Anton Varyheavy ဟုသူကပြောသည်
လက်ရှိငါလက်တော့တွင်အကောင်းဆုံးစွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုရှိသောပတ်ဝန်းကျင်သည် KDE ဖြစ်သည်၊ အထူးသဖြင့်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်အားအကောင်းဆုံးရလဒ်များပေးသောပတ်ဝန်းကျင်မှာ OpenSUSE ဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်နောက်ဆုံးဗားရှင်း မှစ၍ ဖြစ်သည်။
Anton Varyheavy အားစာပြန်ပါ
Ubuntu 13 ကိုအခြေခံထားသည့် Ubuntu 12.04 ကိုအခြေခံထားသော Linux mint 8 KDE distro (စီးပွားဖြစ်ဂရပ်ဖစ်ဒရိုင်ဘာနှင့်ရှင်းလင်းစွာနားလည်ရန်အရေးကြီးသည်ဟုထင်မြင်သည်) သည်ကျွန်ုပ်၏စက်တွင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအရာတစ်ခုကိုသတိပြုမိခဲ့သည်။ ။
ဒါကြောင့် Ubuntu 12.04 ဟာ Laptop တွေအတွက်အကောင်းဆုံး distro ဖြစ်တယ်ဆိုတာသဘောတူတယ်။
Manuel Perez ဟုသူကပြောသည်
uff Ubuntu 12.04 ပိုကောင်းတဲ့ laptop တွေအတွက်။ ဘယ်နေရာမှာငါတပ်ဆင်ထားတာလဲ၊ ကောင်းကောင်းပိတ်ထားလို့မရတဲ့လက်တော့ပ်
Rodolfo အေGonzálezအမ် ဟုသူကပြောသည်
ငါက Fedora နဲ့ရိုင်းစိုင်းတဲ့တည်ငြိမ်မှုရှိတယ်၊ အဲဒါကငါ့အတွက်အရမ်းကောင်းတဲ့ beta 18 ကိုတောင်သုံးတယ်။
Rodolfo A. Gonzálezအမ်သို့ပြန်ပြော
ငါမကြာမီ Fedora 18 အကြောင်းကိုတစ်ခုခုရေးပါ, ညှိနေဖို့။ 🙂
ဆာဂျီယို မက်စီမီလီယာနို ပါဗွန် ဟုသူကပြောသည်
နှင့် KUBUNTU? 🙁
Sergio Maximiliano Pavónအားပြန်ပြောပါ
၎င်းသည် Ubuntu တွင်အကျုံးဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် distro တစ်ခုချင်းစီ၏ "အရသာများ" ကိုသီးခြားစီစတင်စဉ်းစားရန်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အခွံချွတ်ပါလိမ့်မည်။ 🙂
Ubuntu / Mint / Elementary OS / Chakra / Fedora / Mandriva / OpensSuse / Kubuntu / Xubuntu / Sabayon ဒါတွေဟာငါအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဖြန့်ဖြူးသူတွေပါ၊ သူတို့ဟာဒီစာရင်းထဲမှာပါ ၀ င်ပြီးကျွန်တော့်အပေါ်တော်တော်ကောင်းတဲ့စွဲမှတ်မှုဖြစ်စေတယ်။ အမှန်တရားကတော့ GNU / Linux ကမ္ဘာကြီးရဲ့အကောင်းဆုံးဟာသူ့ရဲ့မတူကွဲပြားမှုပဲ။ ယခုနှစ်ကိုရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်ပါကယခုနှစ်ပေါင်းများစွာအတွက် Ubuntu နှင့် Mint တို့ကအများဆုံးထည့်ဝင်ခဲ့ကြပြီးသုံးစွဲသူများကိုဤနှစ်များသို့အများဆုံးရောက်ရှိစေခဲ့ပြီးမဲဆန္ဒနယ်မြေများထက်မဲဆန္ဒနယ်များပိုမိုရရှိခဲ့သည်ဟုနှစ်အတန်ကြာယုံကြည်ခဲ့သည်။
အဲ့တာမှန်တယ်။ Arch လည်းအတော်လေးနည်းနည်းကြီးထွားလာနေပါတယ်။
ဒါမှန်တယ် ... ငါသူတို့အနာဂတ်ဖြစ်ထင်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံး Ubuntu !!!
ငါအထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက် Fedora ကိုသုံးဖို့သွေးဆောင်ခံခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် Ubuntu ဟာငါပိုကောင်းတဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုလွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့ပထမဆုံး distro ဖြစ်လို့ Ubuntu နဲ့အတူဆက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီတစ်ရက်မှာငါလိုချင်တဲ့ fedora ကိုစမ်းသပ်ဖို့ partition တစ်ခုလုပ်လိမ့်မယ်။
ငါကြိုးစားခဲ့ပြီး Linux ကိုသုံးလေ့ရှိသကဲ့သို့။ ငါအဲဒါကိုအကျွမ်းတဝင်မရှိဘူး linux mint ကိုပြန်သွားခဲ့တယ်။ (LMDE) ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Linux တွင်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင် (ကြောင်၊ ခွေး၊ ကျား၊ Sakura သို့မဟုတ် Tomoyo) ရှိရန်
Valve ၏ Steam Box console အသစ်သည် Linux ကိုသုံးလိမ့်မည်